Runtastic Heart Rate PRO, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Indray mandeha indray, ry zalahy ao amin'ny Runtastic dia manolotra ny mpampiasa iPhone rehetra fampiharana azo alaina maimaim-poana. Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba ny Runtastic Heart Rate PRO, fampiharana iray izay lasa mpanara-maso ny fo izahay. Na dia mandritra ny fotoana kelikely aza dia mandray anjara, maro ireo mpitia fanatanjahan-tena izay nahazo «quantifier» na smartwatch mivantana ahafahantsika mahalala ny fitepon'ny fony amin'ny fotoana rehetra, tsy ny rehetra no manana ary mbola aleon'izy ireo mivoaka manao fanatanjahan-tena miaraka amin'ny finday avo lenta mihaino ny mozika ankafiziny sy manara-maso ny làlana arahiny amin'ny fotoana rehetra.
1 Runtastic Heart Rate PRO Endri-javatra lehibe
2 Ahoana ny fiasan'ny Runtastic Heart Rate PRO
Runtastic Heart Rate PRO Endri-javatra lehibe
Azontsika atao ny mandrefy refesina tsy voafetra amin'ny pulsation antsika, amin'ny fotoana sy toerana ary isaky ny mila.
Mety hisy ny fandrefesana fanivanana arakaraka ny nakanana azy ireo tamin'ny fitsaharana, talohan'ny na aorian'ny fampiofanana, arakaraka ny fihodinan'ny be indrindra.
Runtastic Hear Rate PRO dia manolotra sary iray ahitantsika ny fivoaran'ny fiolahana pulse ary mampitaha azy amin'ny pulsations miala sasatra.
Noho ny fiasan'ny fampahatsiahivana dia hampahatsiahy antsika avy hatrany ny fampiharana fa tokony hitondra ny fanalahidintsika matetika isika.
Amin'ny maha-versi PRO azy, tsy manana karazana doka na fividianana ao anaty app izy io.
Ahoana ny fiasan'ny Runtastic Heart Rate PRO
Ny fiasan'ity rindranasa ity dia tena tsotra, satria tsy maintsy manao izany ihany izahay apetaho ary atsaharo kely ny rantsan-tànana manondro ny masolavitra fakan-tsary ary ny flash. Tsy mila manindry mafy ianao mba tsy hanovana ny lalan-dra satria mety hisy vokany eo ny vokany. Ity rindranasa ity dia mifanaraka amin'ny iPad ihany koa, saingy satria manana flash izy io, rehefa manao ny refy dia tsy maintsy ataontsika amin'ny toerana misy jiro ampy tsara izany.
Runtastic Heart Rate PRO dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaimpoana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity. Ny fampiharana dia manana salan'isa 4,5 kintana amin'ny 5, toy ny ankamaroan'ny fampiharana an'ity mpandraharaha ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Runtastic Heart Rate PRO, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra